Kheyraadka Masiibooyinka | Caafimaadka Maskaxda Texas
Khadadka Taageerada Caafimaadka Dhimirka ee Gobolka oo dhan COVID-19 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii waa bilaash 833-986-1919 .
Haddii aad u aqoonsatid inaad tahay shaqaale safka hore ah, weydii kooxaha taageerada qaaliga ah ee aan-kharashka lahayn, dalban.
Kheyraadka Coronavirus (COVID-19)
Guddiga Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Texas ayaa soo saaray oo la soo ururiyey ilaha waxtar leh labadaba Adeegyada Texans iyo bixiyeyaasha inta lagu gudajiray dhibaatadii COVID-19.
COVID-19 SharePoint ee Bixiyeyaasha
Qeybta ‘COVID-19’ ee Bixiyaha ‘SharePoint’ waxaa ku jira macluumaad casriyeysan oo la xiriira COVID-19 si loogu adeegsado adeeg bixiyeyaasha qandaraaska ku jira iyo in lala wadaago macaamiisha, bukaanka iyo xubnaha shaqaalaha. Komishanka Adeegyada Caafimaadka iyo Aadanaha (HHSC) wuxuu si joogto ah u cusbooneysiiyaa SharePoint maaddaama macluumaad cusub iyo ilo laga helayo.
Nooca Macluumaadka ee Laga Helayo COVID-19 Provider SharePoint
Goobta Bixiye SharePoint waxay bixisaa macluumaad iyo xiriiriyeyaal bogagga ay hayaan Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, Ururka Caafimaadka Adduunka, Waaxda Adeegyada Caafimaadka Gobolka Texas, Maandooriyaha Maandooriyaha iyo Maamulka Adeegyada Caafimaadka Maskaxda, iyo HHSC. Macluumaadka waxaa loo abaabulaa iyadoo loo eegayo qeybaha soo socda:
Cusbooneysiinta guud iyo macluumaadka
Kheyraadka (Macluumaadka Medicaid iyo Medicare)
Dukumiintiyo dukumiinti ah (farriimaha la faafiyo)
Sida Loo Helo Helitaanka COVID-19 Provider SharePoint
Bixiyeyaashu waxay ku heli karaan adeegga ‘COVID-19 Provider SharePoint’ iyagoo emayl u diraya Dabeecadda Caafimaadka_COVID-19@hhsc.state.tx.us.
Jawaab ahaan waxaad heli doontaa casuumaad iimayl ah hal ilaa laba maalmood oo shaqo gudahood. Urur ayaa laga yaabaa inuu codsado helitaanka dad badan iyagoo ku siinaya cinwaankooda e-mayl fariinta. Haddii aad su’aalo qabtid, emayl u soo dir Dabeecadda Caafimaadka_COVID-19@hhsc.state.tx.us
Macluumaad dheeri ah iyo ilo ku saabsan COVID-19, booqo:
Waaxda Texas ee Adeegyada Caafimaadka Gobolka
Macluumaadka Caafimaadka Habdhaqanka Musiibada
Bixinta Caawinta Caafimaadka Habdhaqanka Musiibada
Caawimaadda gobolka iyo federaalka ayaa la heli karaa musiibo ka dib si looga caawiyo isku dubaridka u diyaargarowga caafimaadka habdhaqanka aafada, jawaab celinta, iyo soo kabashada. Tan waxaa ka mid ah adeegyada isku-dubbaridka maaraynta culeyska iyo adeegyada la-talinta dhibaatooyinka ee heer maxalli ah. Waxbadan ka baro gargaarka caafimaadka habdhaqanka musiibada.
Adeegyada Caafimaadka Habdhaqanka Musiibada
Adeegyada caafimaadka habdhaqanka musiibada waxay wax ka qabtaan dhibaatooyinka nafsaaniga ah, shucuurta, garashada, koritaanka, iyo saameynta bulshada ee masiibooyinku ku yeeshaan badbaadayaasha. Waxbadan ka baro adeegyada caafimaadka hab dhaqanka musiibada.
Dalada Caafimaadka Habdhaqanka Musiibada
Dalladu waxay fududeeysaa isgaarsiinta waxayna kordhisaa iskuxirka hay’adaha kaladuwan ee gobolka inta lagu jiro iyo kadib xaaladaha degdegga ah ee maxalliga, gobolka ama federaalka lagu dhawaaqay, shilalka ama musiibooyinka. Waxbadan ka baro dalladda caafimaadka habdhaqanka musiibada.
Shabakada Maareynta Cadaadiska Dhibaatada Khatarta ah ee Texas
Maareynta diiqadda dhacdooyinka halista ah waa nooc ka mid ah faragelinta dhibaatooyinka ee loogu talagalay in lagu bixiyo taageerada dadka ay soo mareen dhacdooyin naxdin leh. Waxaa la siiyaa jawaabeyaasha ugu horreeya, jawaabayaasha ugu horreeya ee aan dhaqanka ahayn, shaqsiyaadka, qoysaska, kooxaha, iyo ururada. Kooxaha isku xirka maareynta culeyska dhacdada ee halista ah waxaa la heli karaa 24 saacadood maalintii. Wax lacag ah lagama qaadayo adeegan. Ka baro wax badan oo ku saabsan shabakadda maareynta culeyska dhacdooyinka daran ee Texas.
Sideen ku Heli Karaa Adeegyada Caafimaadka Habdhaqanka Musiibada?
Khadka Xadgudubka Maandooriyaha iyo Maamulka Adeegyada Caafimaadka Maskaxda (SAMHSA) Khadka Caawinta Musiibada 1-800-985-5900
Wac oo hel latalin degdeg ah 24/7. Kani waa lacag la’aan, qarsoodi ah, luuqado badan, waxaana laga heli karaa farriinta qoraalka. Maamulka caafimaadka maskaxda ee deegaanka ama maamulada caafimaadka habdhaqanka ee gobolka oo dhan ayaa sidoo kale leh khadadka taleefannada dhibaatooyinka 24/7.
Waxbadan ka baro sida loo helo adeegyada caafimaadka hab dhaqanka musiibada
Adeegyada Dabeecadda Musiibada ee lagu bixiyo Komishanka Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Texas